Otu Hape na -etinye ego n'ime ụlọ nrụpụta ọhụrụ na Song Yang
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hape Holding AG esorola gọọmentị Song Yang County banye nkwekọrịta itinye ego na ụlọ ọrụ ọhụrụ na Song Yang. Ogo ụlọ ọrụ ọhụrụ a dị ihe dịka square mita 70,800 ma dị na Song Yang Chishou Industrial Park. Dịka atụmatụ a siri dị, a ga -amalite owuwu na Maachị na fac ọhụrụ ...
Mgbalị a na-alụ maka COVID-19 gara n'ihu
Oge oyi abịala na COVID-19 ka na-achịkwa akụkọ. Ka ị nwee afọ ọhụrụ dị mma na obi ụtọ, mmadụ niile kwesịrị ime ihe nchebe siri ike. Dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ ya na ọha mmadụ, Hape nyekwara ọtụtụ ihe nchekwa (mkpuchi ụmụaka) ...
Ọhụrụ 2020, Olileanya Ọhụrụ - Hape “Mkparịta ụka 2020 na onye isi” Social maka ndị ọrụ ọhụrụ
N'ehihie nke Ọktoba 30th, emere “2020 · Mkparịta ụka ya na onye isi” Social maka ndị ọrụ ọhụrụ na Hape China, ya na Peter Handstein, Onye guzobere na onye isi nke Hape Group, na-ekwu okwu na-akpali akpali na itinye aka na mkparịta ụka miri emi. ndị ọrụ ọhụrụ na saịtị ka ọ na -anabata ndị bịara ọhụrụ. ...
Nghọta banyere nleta Alibaba International na Hape
N'ehihie nke Ọgọstụ 17th, ntọala ụlọ ọrụ Hape Group dị na China gosipụtara na ndụ iyi nke nyere nghọta maka nleta Alibaba International mere n'oge na -adịbeghị anya. Maazị Peter Handstein, onye nchoputa na onye isi oche nke Hape Group, duru Ken, onye ọkachamara na -ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ si Alibaba International, na nleta ...